गोरखाकी १७ बर्षे युवतीको यस्तो भिडियो आयो!!! तेक्वान्दोमा व्लाक बेल्ट!!!!(भिडियो ) « Np Online TV
गोरखाकी १७ बर्षकी युवती सुनैना खनालसँग अचम्मको कला छ । तेक्वान्दोमा व्लाक बेल्ट समेत पाएकी सुनेना एक खुट्टा काँधमा हालेर अर्को खुट्टाले टेक्दै सरर स्कुटी चलाउँछिन् । उनी १० देखि १५ मिनेटसम्म यस्तो गर्छिन् । उनको यो कला देखेर हेर्नेहरु चकितै पर्दछन् तर उनलाई हौसला दिने भने कोहि भएनन् ।
शिशिर भण्डारीले मिडियामा ल्याएका सुनेनाले बिचमै पढाई पनि छोडिन् । उनले परिवारको समस्याका कारण यस्तो गरिन् । साथै उनको यो अचम्मको कलालाई प्रशँसा गर्ने कोहि नहुँदा उनले यस्तो गर्न पनि छोड्दैछिन् । भिडियो हेर्नुस, सुनेना स्कुटी एक खुट्टा काँधमा राखेर चलाउने मात्र हैन, शरीर लचिलो बनाउँदै यस्तोसम्म गर्न सक्छिन् ।भिडियो :